One of Popular Snow shọvel Nkwanye si Richina - China Richina
One of Popular Snow shọvel Nkwanye si Richina
Arọ-oru Rolling 26-Inch Snow Pusher na-6-Inch Wheels na Kemeghi emefu
The Rolling Snow Pusher na-engineered na-eme ka snow mwepụ ngwa ngwa na mfe gị azụ na n'ubu. Na a haziri ị don`t nwere ike iche banyere nje si ekwe, na-atụba na-ebute n'ihi na Rolling ngagharị na imewe nke shọvel eliminates mgbu na-abịa na-eji shọvel. All ọ na-ewe bụ a dị mfe na-atụ n'ịgba na pivoting ije.
Na ya concave imewe na metal akpụcha onu, ya nwere ike ikpochapụ snow mfe na otu ngafe. Shọvel jikoro 26 sentimita asatọ, obosara site na 13 sentimita asatọ ogologo n'ihi ya ọ pụrụ ikpochapụ a ngwa ngwa obosara ụzọ na-eje ije, ma ọ bụ ikpochapụ a driveway ọsọ ọsọ karịa na a omenala shọvel, otú ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe oyi eme ma ọ bụ iwepụtakwu oge na-ekpori ndụ ịhụnanya n'ime ụlọ.
The mgbanwe ahụ nwere ike ịtọ maka onye na mkpokọta elu sitere na site 47 ruo 51 sentimita asatọ ekwe ka ị na-ahọrọ na-ọnọdụ ka mma ịnabata onwe gị. Plus, ahụ bụ padded maka mmezi ịhụnanya na n'aka nkasi obi. Ọzọkwa, mfe Rolling na pivoting ngagharị bụ n'ikike nke 6-inch arọ-oru polypropylene wiil. The ridged wheel-enyere ha aka adịgide n'ala na-adị mfe ime ka ibe mgbe ị shọvel snow ahụ.
Atụmatụ nke Rolling Snow Pusher shọvel:
N'ozuzu akụkụ: 16.5 "W handle; 47 "- 51" H mgbanwe ngụkọta elu; agụba: 26 "W x 13" H; wheel: 6 "n'obosara x 2,5" oké; 9 lbs
Shọvel atụmatụ ihe aluminum handle na padding, polypropylene wiil na shọvel na metal ịkpụcha agụba.
Inogide pivoting wiil na ụma traction ridges ife efe effortlessly gburugburu n'ọnụ, si ekwo ekwo na driveways.
The mgbanwe telescoping handle-enye gị ohere iji na-enweta zuru okè ogologo maka ọrụ.
The usoro ịkwa n'akuku-eme ka ya na ị pụrụ iguzosi ike ziri ezi na-enweghị azụ mgbu ma ọ bụ straining.
CASL Ụdị Akwadoo ya na ngwaahịa na a 1 afọ emeputa akwụkwọ ikike maka-echegbu onwe-free ịzụta.